Shinoa Crystal Candy Jar miaraka amin'ny Lid, Tankazo fitahirizana sakafo fitahirizan-tsakafo, vera fofona, Fivarotana fanamboarana famoriam-bola amin'ny trano famokarana sy mpanamboatra | Chuancheng
Crystal Candy Jar miaraka amin'ny Lid, Tifitra fitahirizan-tsakafo fitaratra madio, poti-panandrana, boaty famoronana famoronana famoronana
Ireo Jars ireo dia tsara amin'ny fitahirizana mofomamy, kojakoja vita amin'ny mofo, voninkazo, siramamy, corps, baolina vita amin'ny landihazo, ary ny sakafom-piainana tianao indrindra sy ny sakafom-boankazo ary maro hafa.
Ity lava-bary fitaratra ity dia mety amin'ny mpifanila lakozia, kabinetra, trano fivarotana kafe ary biraon'ny birao.
Ny habetsaky ny boaty amin'ny vatomamy dia ahafahanao mampiasa azy io ho an'ny vatomamy, sôkôla, mofomamy, voanjo, trinkets ary firavaka mihitsy aza, ary manampy sombintsombiny mahafinaritra amin'ny haingo tabletop.
✿ 【GRASS CANDY DISH】 noforonina fitaratra mangarahara kalitao, io lovia vatomamy tsara tarehy izany dia manangona ary manome taratra ho an'ny voka-bika mahavariana, tonga lafatra hampiala ny namana sy ny ankohonany.
ES 【DESIGN INDRINDRA INDRINDRA designIGNy famolavolana mahazatra miaraka amin'ny fahatapahan-tarehy namboarina dia mahatonga ny vatofam-boankazo tsiro ary mamirapiratra. Ny fikarakarana am-polony ao anaty dia toa tsara loatra hanohitra. Tsimbino ny ankohonanao sy ny vahiny manangom-boly mahafinaritra miaraka amin'ny lovia vatomamy, mamelona hetsika mahafinaritra.
IZ 【FIVORIANA MISY FINOANA】 Ny habe mety amin'ny boaty vatomamy dia ahafahanao mampiasa azy io ho an'ny vatomamy, sôkôla, cookies, tsaramaso, trinkets ary firavaka, ary manampy koa ny fahatsarana mahafinaritra manoloana ny haingo tabletop.
US 【NY FAMPIASA AZY】 mety ho an'ny fampiasa manokana sy hetsika manokana toy ny fampakaram-bady, fandraisana, sifotra, fialantsasatra ary fivoriam-pianakaviana, buffets ary ny karazan'entana rehetra. Tsara ihany koa ny mampiasa azy io ho fanomezana mendrika.
DE 【ELEGANT DECOR】 Jar lafatra fitahirizana Crystal dia tonga lafatra amin'ny haingon-trano fampakaram-bady sy trano ary zaridaina zaridaina.
Previous: Voahangy latabatra
Manaraka: Tranon-tsolika vita amin'ny vera 160ml
Tavoahangy veromanitra Mill
Tranon-tsolika vita amin'ny vera 160ml
Sakafo masirasira fitotoana menaka misy tavoahangy misy menaka ...
Sampam-paharao 120ml fitaratra sira sy mpivaro-kena Dispenser ...